Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247989 times)
« Reply #630 on: September 24, 2011, 03:36:15 PM »
" ရဲ ဘော် ကို ချူ ချာ "
တပ်သားကိုချူချာကို ရန်သူတွေ ဖမ်းမိသွားသည် ။ တပ်အင်အား မည်မျှရှိသနည်းကို ၄င်းအား
စစ်မေးကြသည် ။ ကိုချူချာ လုံးဝကို ထုတ်မပြောချေ..။ အမျိုးမျိုး စစ်သည် ။ ချော့သည် ။ ခြောက်
သည် ။ မရ ။ ကိုချူချာ ခေါင်းမာမာနှင့် တင်းခံသည် ။ သို့ နှင့်
" စစ်သားတစ်ယောက်ကို ဗော့ဒ်ကာ တစ်ပုလင်းနှုန်း ပေးပါမည် " ဟု ဖြားယောင်းသည် ။
ကိုချူချာ ခေါင်းယမ်းပြီး ပြောသည် ။
" ဗော့ဒ်ကာ ပုလင်း ၁၀၀ နဲ့ကျုပ်တပ်မတော်ရဲ့လျှို့ ဝှက်ချက်ကို ထုတ်ပြောမဲ့ ကောင်းစား
မှတ်လို့ လား...မပြောဘူး...အသေသတ် "
« Last Edit: September 26, 2011, 09:27:22 AM by tunaye2011 »
« Reply #631 on: September 24, 2011, 03:48:07 PM »
" ကုန် ကား မောင်း တဲ့ကို ချူ ချာ "
ရုရှားလုပ် KAMAZ ကုန်တင်ကားကို ကိုချူချာ မောင်းလာသည် ။ ရုတ်တရက် ကားဘရိတ်
ပေါက်သွားသည် ။ ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ကိုချူချာ ကမန်းကတန်း စဉ်းစားသည် ။
" ရှေ့ တည့်တည့်ကို ဆက်သွားရင် အုတ်နံရံကို တိုက်မိမယ်..၊ ငါ အသက်ရှင်ဖို့လမ်းမရှိ "
ဟု တွေးသည် ။
" ညာဘက်ကို ကွေ့ လိုက်ရင် ဈေးထဲ ရောက်သွားမယ် .. လူတွေအများကြီးကို တက်နင်းမိမယ်
လူတွေ သနားစရာ "
ဘယ်ဘက်ကို ကိုချူချာ လှမ်းကြည့်သည် ။ အဲ့ဒီမှာ ချာတိတ်လေး တစ်ယောက်တည်း..။ ကိုချူ
ချာ စဉ်းစားသည် ။
" ကိုယ့်အသက်သေမှာ...လူတွေအများကြီး သေမှာထက် ဘယ်ဘက်ကို ကွေ့ တာ အကောင်းဆုံး
ဖြစ်မယ် " ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ ဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်း ကွေ့ လိုက်သည် ။
နောက်နေ့ ထုတ် သတင်းစာတွင် ကားတိုက်မှုသတင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ရေးထားသည် ။
" မနေ့နေ့ လည် ၁၂ နာရီက မြို့ လယ်ဈေးကြီးကို ကုန်တင်ကား တစ်စီး ၀င်တိုက်ရာ လူ ၁၀၀
ကျော် သေဆုံးသည် ။ ကားတိုက်မှုသည် ချာတိတ်လေးတစ်ယောက် ဈေးဘက် ပြေးထွက်သွား
ရာက စတင်ခြင်း ဖြစ်သည် ။ "
« Reply #632 on: September 24, 2011, 03:57:52 PM »
" ဖြောင့် ချက် "
အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် ရှေးဟောင်းပစ္စည်း တူးဖော်ရာ ကျောက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အခေါင်း
တစ်ခုကို ဆေးစီရင်ထားသည့် လူသေအလောင်း ( မမ်မီ ) နှင့်အတူ တွေ့ သည် ။
မည်သူ့ အလောင်း ဖြစ်မည်နည်းဆိုသည်ကို နိုင်ငံတကာမှ ရှေးဟောင်သုတေသန ပညာရှင်များ
ဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားသည် ။ မအောင်မြင်ချေ..။
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုမှ ပညာရှင်များ ရောက်လာကြသည် ။ အလောင်းကို မိမိတို့ ချည်း စစ်
ဆေးခွင့်ပြုရန် မေတ္တာရပ်ခံသည် ။ မေတ္တာရပ်ခံသည့်အတိုင်း ခွင့်ပြုလိုက်ကြသည် ။
နောက်နေ့ တွင် ဆိုဗီယက် ပညာရှင်များ နဖူးပေါ်မှ ချွေးစများကို လက်နှင့်သုတ်ရင်း အခန်းထဲမှ
ထွက်လာကြသည် ။ စိတ်ဝင်တစား စောင့်နေသည့် ပရိတ်သတ်ကို ကြေငြာသည် ။
" အလောင်း ပိုင်ရှင်ဟာ အာမင်ဟိုတက် ၂၃ ဖြစ်ပါတယ်. "
" သူဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ် သိသလဲဗျ. "
" သူကိုယ်တိုင် ၀န်ခံတာပဲလေ "
« Last Edit: September 24, 2011, 04:01:43 PM by tunaye2011 »
« Reply #633 on: September 24, 2011, 04:17:56 PM »
" ကြောက် ပါ ပြီ ခင် ဗျ "
ကိုချူချာကို မိတ်ဆွေများ ကြက်တူရွေးတစ်ကောင် လက်ဆောင်ပေးသည် ။ အလွန်လှ၏ ။
အပြင်မှာ ဈေးကြီးပေး ၀ယ်ရသော အမျိုးဖြစ်သည် ။ သို့ သော် ရိုင်းစိုင်းသော စကားတွေကိုသာပြော
ကိုချူချာ ..၊ ၄င်း၏ ဇနီး နှင့် ယောက္ခမ တို့ ကို မတွေ့ လိုက်နှင့် ၊ တွေ့ လိုက်သည်နှင့် ဖွတ်ကျား
တွေ ဟု ပြောပြီး နှုတ်ဆက်သည် ။ ဒီအကျင့်ဆိုးကြီး ပျောက်အောင် အမျိုးမျိုး ကြိုးစားကြည့်သည် ။
ပြင်ပြောအောင် သင်ပေးသည် ။ မရ ။ လှောင်ချိုင့်ကို အ၀တ်နှင့် အုပ်သည် ။ မရ ။ ဧည့်သည်လာ
လျှင် ဒင်း သိနေသည် ။ အိမ်သားတွေ၏ ခြေသံကို ဒင်း ကျက်မိနေသည် ။ နောက်ဆုံး သည်းမခံ
နိုင်တော့သည်နှင့် ကြက်တူုရွေးကို ရေခဲသေတ္တာထဲ ကိုချူချာ ထည့်ထားလိုက်သည် ။
ဆယ်မိနစ်ခန့်တံခါးကို နှုတ်သီးဖြင့် ဆိတ်သံ..၊ ဆဲဆိုသံတွေ ကြားရသည် ။ နောက်တော့ လုံး-၀
အသံတိတ်သွားသည် ။ ကိုချူချာ ရေခဲသေတ္တာကို ဖွင့်လိုက်သည် ။ ကြက်တူရွေးက ကိုချူချာကို အသံ
တိုးတိုးလေးဖြင့် ပြောသည် ။
" ကျနော် တောင်းပန်ပါတယ်...ကျနော် မှားပါတယ်..။ ဒီအိမ်က လူတွေအားလုံး လူကောင်းတွေပါ
ကျနော်..နောက် ဘယ်တော့မှ ကြမ်းတမ်းတဲံ့စကား မပြောတော့ပါဘူး.. "
ကြက်တူရွေး၏စကားကြောင့် ကိုချူချာ သနားသွားသည် ။
" အေးပါ...မမှားတဲ့သူ မရှိပါဘူး...။ ရပါတယ် "
ကြက်တူရွေး စောစောကအတိုင်း တိုးတိုးလေး ထပ်မေးသည် ။
" အထဲက ကြက်က အမွှေးတစ်ချောင်းမှ မရှိတော့ဘူး...သူ ဘာလုပ်ခဲ့လို့ လဲဗျ. "
« Reply #634 on: September 26, 2011, 12:40:57 PM »
" အိပ် ချင် တယ် "
မိန်းမကြီးတစ်ဦး၏ အိမ်ဝင်းထဲသို့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေဟန်ရှိသည့် ခွေးတိုကြီး တစ်ကောင် ၀င်လာသည် ။
သန့် သန့် ပြန့် ပြန့်ရှိသည် ။ လူတွေကို ယဉ်ပါးသည့်ပုံ ပေါက်သည် ။ လည်ပတ် ပတ်ထားသည် ။ သူ့ သခင်
ရှိလိမ့်မည် ။ ခွေးလေခွေးလွင့် မဟုတ်နိုင်ဟု မိန်းမကြီး ကောက်ချက်ချသည် ။
မိန်းမကြီးအနားသို့ခွေးကပ်လာသည် ။ မိန်းမကြီးက ခေါင်းကို ပွတ်သတ်ပေးသည် ။ မိန်းမကြီး အိမ်ထဲ
၀င်သည် ။ သူ့ နောက်က ခွေးလိုက်ဝင်လာသည် ။ ခွေးက ချောင်တစ်ခုဘက်သို့ကွေ့ လိုက်ပြီး လှဲချလိုက်သည်။
ခဏအတွင်းမှာပင် ၄င်း အိပ်မောကျသွားသည် ။ တစ်နာရီကျော် ကြာအောင် အိပ်သည် ။
နောက်တစ်နေ့ လည်း ၄င်း ရောက်လာပြန်သည် ။ အိမ်ရှင်မိန်းမကြီးကို အမြီးနှံ့ ပြီး နှုတ်ဆက်သည် ။ မ
နေ့ ကအတိုင်း မိန်းမကြီးနောက်က လိုက်ပြီး အိမ်ထဲဝင်သည် ။ မနေ့ က ချောင်မှာပဲ လှဲအိပ်သည် ။ အိပ်ရေးဝသော
အခါ ၄င်း အိမ်သို့ပြန်သွားသည် ။
ဤအတိုင်း ရက်ဆက်ဖြစ်လာသည် ။ မိန်းမကြီး စိတ်ဝင်စားသည် ။ ခွေး၏လည်ပတ်မှာ စာတိုလေး ရေးပြီး
ချိတ်ပေးလိုက်သည် ။ စာမှာ ခွေးပိုင်ရှင် ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်..။ ကျမအိမ်ကို ဒီခွေး နေ့ တိုင်းလာအိပ်
နေတယ်ဆိုတာ သိပါသလား ဟူ၍ဖြစ်သည် ။
နောက်နေ့ တွင် ထုံးစံအတိုင်း ခွေးအိုကြီး ရောက်လာသည် ။ ၄င်း၏ လည်ပင်းတွင် နောက်စာတိုလေး တစ်
စောင် ချိတ်ဆွဲထားသည် ။ စာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် ။
" ဒီခွေးဟာ ကလေး ခြောက်ယောက်ရှိတဲ့ အိမ်မှာ နေပါတယ်..။ ကလေး နှစ်ယောက်ဟာ သုံးနှစ်တောင်
မပြည့်သေးပါဘူး..။ တစ်နေရာရာမှာ အိပ်ရေးဝအောင် လာအိပ်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..။ မနက်ဖြန် ကျနော်
လည်း လာပါရစေလားခင်ဗျာ "
« Reply #635 on: September 26, 2011, 01:03:09 PM »
" မ ကူ ညီ ရင် အ ကောင်း သား "
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ အင်မတန်ချောမောလှပတဲ့ မင်းသမီးလေး တစ်ယောက်
ရှိသည် ။ သူမကို လက်ထပ်ရန် မင်းသား နှစ်ပါး ကြိုးစားကြသည် ။ တစ်ယောက်မှာ အသက်ကြီး ၀၀ဖိုင့်
ဖိုင့်နှင့် မျက်စိကလည်း မှုံသေးသည် ။ ကျန်မင်းသားတစ်ပါးမှာ ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် ဗလကောင်းကောင်းနှင့်
လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ် ပြီး ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိသည် ။ သူတို့ နှစ်ယောက်ကို ရေကန်မှာ ရေကူးပြိုင်ခိုင်း
သည် ။ ကမ်းတစ်ဖက် ပန်းတိုင်သို့အရင်ရောက်တဲ့သူကို မင်းသမီးက လက်ထပ်မည် ဖြစ်သည် ။
တာလွှတ်လိုက်သည်နှင့် လူငယ်မင်းသားက ဖျတ်ဖျတ်လတ်လတ် ကူးသည် ။ မင်းသားကြီးကတော့
ဖြေးဖြေးမှန်မှန်ပဲ ကူးလာသည် ။ မင်းသားငယ် ရှေ့ ကို အဝေးကြီး ရောက်သွားသည် ။ ဒီအတိုင်းဆို သူ
နိုင်ဘို့သေချာနေပြီ...။ မင်းသမီးက အားပေးတဲ့အနေဖြင့် သူ့ ရှေ့ မှာ ရပ်လိုက်ပြီး ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်ကို
ဒီမှာတင် မထင်မှတ်တာ ဖြစ်ကုန်သည် ။ လူငယ်မင်းသား၏ ရေကူးနေသည့်အရှိန် နှေးသွားသည် ။ ရှေ့ 
ကို ပင်ပင်ပန်းပန်း ခက်ခက်ခဲခဲနှင့် ကူးခပ်နေရသည့်ပုံပေါက်လာသည် ။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် နောက်က ပြိုင်ပွဲဝင်
မင်းသားကြီး မှီလာသည် ။ ထို့ နောက် ကျော်တက်ပြီး ပန်းဝင်သွားလေသည် ။
မင်းသမီး အကြီးအကျယ် စိတ်ပျက်သွားသည် ။ မင်းသားငယ်ကို အပြစ်တင်သံဖြင့် ပြောသည် ။
" ရှင် ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ... ရှင့်ကို ကျမရဲ့ကြင်ယာအဖြစ် မျှော်လင့်ထားတာ...ရှင် နိုင်ဖို့ လည်း
သေချာသလောက် ဖြစ်နေပြီ..။ ဘာဖြစ်လို့အနားကပ်မှ တုံ့ ဆိုင်း တုံ့ ဆိုင်း ဖြစ်သွားရတာလဲ "
မင်းသားငယ်က မောဟိုက်သံနှင့် ပြန်ဖြေသည် ။
" ဟုတ်တယ်...သူ့ ကို အပြတ်ဖြတ်ထားတာကြောင့် တို့ နီုင်မယ်လို့ လည်း ထင်ခဲ့တယ်..။ ဒါပေမဲ့
မမျှော်လင့်ပဲ မင်းကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်အစားတွေကို ချွတ်လိုက်တော့ ရေကူးရတာ ခက်လာတယ်
ရေမှော်တွေနဲ့ငြိနေတော့ ဘယ်လို ကူးကူး ရှေ့ ကို မတိုးတော့ဘူး.. "
« Last Edit: September 26, 2011, 01:05:21 PM by tunaye2011 »
« Reply #636 on: September 26, 2011, 01:28:29 PM »
" လို မှ လုပ် တယ် "
နာမည်ကြီး ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးကို သတင်းထောက် ဗျူး နေသည် ။
" အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ဆရာဝန်တော်တော် များများဟာ ပိုက်ဆံရရင်ပြီးရော ဆိုပြီး
မလိုအပ်ပဲနဲ့ခွဲစိတ်နေကြတယ်လို့သတင်းစာတွေက ဆိုပါတယ်..။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်
ပြီး ဒေါက်တာ ဘယ်လိုမှတ်ချက် ပေးနိုင်ပါသလဲ "
ခွဲစိတ်ဆရာကြီး ပြန်ဖြေသည် ။
" သူများတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ မပြောချင်ဘူး..။ ကျနော်ကတော့ တကယ် ပိုက်ဆံ
လိုမှ ခွဲစိတ်ပါတယ်... "
« Reply #637 on: September 27, 2011, 10:21:18 AM »
" မ ချစ် လို့မ ဟုတ် ပါ "
ကိုချူချာတွင် ဇနီး နှစ်ယောက်ရှိရာ ၄င်းတို့ အကြား မကြာခဏ စကားများ ရန်ဖြစ်ကြလေ့ ရှိသည် ။
ရန်ဖြစ်သည့်အခါတိုင်း ယောင်္ကျားဖြစ်သူ မိမိဘက်လိုက်ရန် နှစ်ယောက်စလုံး ကြိုးစားကြရာတွင် သူတို့ နှစ်
ဦးအနက် မည်သူ့ ကို ပိုချစ်သနည်း ဆိုသည့် မေးခွန်းကို ကိုချူချားအား မေးကြစမြဲ ဖြစ်သည် ။ အကြိမ်
တိုင်းလည်း နှစ်ယောက်စလုံးကို အတူတူုချစ်ပါသည် ဟု ကိုချူချာ ဖြေရသည် ။
ယခုလည်း အလှည့်ကျ ရန်ဖြစ်သည် ။ နောက်ဆုံး ထုံးစံအတိုင်း ကိုချူချာဆီ လာပြီး မည်သူ့ ကို ပိုချစ်
သနည်း ဆိုသည့် မေးခွန်းကို မေးကြပြန်သည် ။
ကိုချူချာကလည်း နှစ်ယောက်စလုံးကို အတူတူချစ်ကြောင်း ဖြေနေကြအတိုင်း ဖြေသည် ။ မရ ။ ဘု
ရားသခင်ကို တိုင်တည်ပြီး ပြောသည် ။ ဒါလည်း မရချေ ။ ဒီတစ်ခေါက်တွင် မိန်းမနှစ်ယောက်စလုံး ထူးထူး
ခြားခြား ခေါင်းမာနေကြသည် ။ လိုချင်သည့် အဖြေမရမချင်း ထွက်မသွားပဲ နေကြသည် ။ အသက်နည်းနည်း
ပိုငယ်သည့် ဇနီးက ပြောသည် ။
" ကျုပ်တို့ ကို လှိမ့်မနေပါနဲ့ ... ။ ဆိုပါစို့ .. အင်မတန်နက်တဲ့ မြစ်ထဲကို ကျမတို့နှစ်ယောက်
ကျသွားတယ်..။ ရှင်က ကမ်းပေါ်မှာ.. ဘယ်သူ့ ကို အရင်ကယ်မလဲ....ကဲ "
ကိုချူချာ အကျပ်ရိုက်သွားသည် ။ ချောင်ပိတ် ခံရပြီဟု သိလိုက်သည် ။ ဘာပဲ ဖြေဖြေ ပြဿနာတက်
တော့မည်ကို မြင်သည် ။ နောက်ဆုံး မယားကြီး ဖြစ်သူထံ မျှော်လင့်သံဖြင့် မေးသည် ။
" မိန်းမရေ....မင်း ရေနည်းနည်း ကူးတတ်တယ် မဟုတ်လားဟေ့ "
« Reply #638 on: September 27, 2011, 10:59:47 AM »
" ဒါ တော့ လာ မ ထိ နဲ့"
အဗ္ဗဒူလာ ခါလစ် ၏ ဇနီးသည် စရိုက်ကြမ်းသည် ။ စိတ်မထင်လျှင် တွေ့ ရာနှင့် ကောက်ပေါက်တတ်၏ ။
ထို့ ကြောင်း ခါလစ် ကို မိန်းမရ ကံမကောင်း ဟု အသိမိတ်ဆွေများ ယူဆကြသည် ။ တစ်နေ့ တွင် အခြားရွာက
အသိတစ်ယောက် ခါလစ် ဆီ အလည်ရောက်လာသည် ။
ဧည့်သည်ကို ကြည့်ပြီး မိန်းမဖြစ်သူ ပွစိပွစိ ပြောသည် ။ ထို့ နောက် နေ့ လည်စာ ချက်ဖို့မီးဖိုချောင်ထဲ ၀င်
သွားသည် ။ ခါလစ် အတော် ကြာအောင် စောင့်သည် ။ သို့ သော်လည်း မိန်းမဖြစ်သူ ထွက်မလာချေ ။ သို့ နှင့်
၄င်းကိုယ်တိုင် မီးဖိုချောင်ထဲ ၀င်ပြီး မိန်းမကို ပြောသည် ။
" မိန်းမရေ.. ဧည့်သည်က အဝေးကြီးက လာရတာကွ.. မြန်မြန်ကျက်အောင် ချက်စမ်းပါ "
ဤသို့ပြောပြီးပြီးချင်း မိန်းမက မီးညှပ်နှင့် ပစ်သည် ။. ခါလစ် ၏ နဖူး တည့်တည့်ကို ထိပြီး သွေးတွေ ဖြာ
ကျလာသည် ။ ခါလစ် ၏ နဖူးပေါ်က သွေးတွေကို သုတ်ပေးရင်း ဧည့်သည်က နှစ်သိမ့်စကား ပြောသည် ။
" စိတ်မပျက်နဲ့ခါလစ်..၊ တစ်ချို့ မိန်းမတွေက ဒီလိုပဲ ။ ဘယ်လိုပဲ ကောင်းအောင် ဆုံးမ ဆုံးမ မရဘူး..။
ကျုပ်မိန်းမဆို ဒေါသ မထွက်လိုက်နဲ့ .. ဒင်း ဒေါသ ထွက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ကျုပ်ရဲ့ မုတ်ဆိတ်ကို ဆွဲပြီး..မီးဖို
ထဲ ပစ်ထည့်ဖို့လုပ်တာကလား... "
ခါလစ် အ၀တ်အစား ပြင်ဝတ်သည် ။ ထို့ နောက် ရင်ကော့ပြီး ပြောသည် ။
" ကျုပ်ကို ခင်ဗျားနဲ့မနှိုင်းနဲ့ လေ....ကျုပ်က မုတ်ဆိတ် အဆွဲခံမဲ့ လူစားမဟုတ်ဘူးဗျ.. မှတ်ထား "
« Reply #639 on: September 27, 2011, 04:39:07 PM »
" ကြည့် ချင် လွန်း လို့ပါ "
သီချင်းသံ ၊ ရယ်မောဟားတိုက်သံတွေ အကျယ်ကြီး ထွက်လာနေသည့် အရက်ဘားထဲသို့အပေါ့အပါးသွား
ချင်သည်နှင့် ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး တံခါးဖွင့်ပြီး ၀င်လိုက်သည် ။ စောစောကအသံတွေ ချက်ချင်းရပ်သွားသည်။
ဆိုင်ထဲကလူတွေအားလုံး သူ့ ကို ၀ိုင်းကြည့်နေကြသည် ။ ဘုန်းတော်ကြီး အနေရ ခက်သလို ဖြစ်သွားသည် ။ ဘား
မင်းဆီ ၄င်းလျှောက်သွားပြီး မေးသည် ။
" မင်းဆီက အိမ်သာကို သုံးလို့ ရမလားဟင် "
သူ့ ကို စာနာသည့် မျက်လုံးများဖြင့် ကြည့်ပြီး ဘားမင်း ပြောသည် ။
" ကျနော်တော့ ဖာသာကို မသုံးစေချင်ဘူး.. "
" ဘာဖြစ်လို့ လဲ... အန္တရာယ်ကို တကယ် မလွယ်နိုင်တော့လို့ ပါ "
" ကောင်းပြီလေ.. တစ်ခုတော့ သတိပေးလိုက်ပါရစေ..။ အိမ်သာထဲမှာ လုံးတီးမိန်းမ ရုပ်တု
ရှိတယ်..။ တစ်နေရာကိုပဲ သစ်ရွက်နဲ့ဖုံးထားတယ် "
" ရပါတယ်...ရုပ်တုကို ဖာသာ မကြည့်ပါဘူး.. "
အိမ်သာရှိသည့် နေရာသို့ဘားမင်း ညွှန်ပြသည် ။ ဘုန်းကြီး သုတ်သုတ်လေး ထွက်သွားသည် ။ မိနစ် အနည်းငယ်မျှ
အကြာတွင် အိမ်သာထဲက ဘုန်းကြီး ထွက်လာသည် ။ ဘားတစ်ခုလုံး ပြန်ပြီး ဆူညံနေသည် ။ သီချင်းသံရော ရယ်မောဟား
တိုက်သံတွေပါ သောသောညံနေသည် ။ ဘုန်းကြီး နားမလည်သဖြင့် ဘားမင်းကို မေးသည် ။
" ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ ... ကျုပ် ၀င်လာတုန်းက အသံတိတ်သွားတယ်..၊ အခု အိမ်သာက ထွက်လာတော့
တိုင်ပင်ထားကြသလိုပဲ ပြန်ပြီး ဆူညံနေတယ်....၊ ဘာလဲ...ဘုရားရဲ့ သားတော်ကို မလေးစားတာလား "
" စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ..၊ ဖာသာဟာ ကျနော်တို့ အထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်သွားပါပြီ..၊ ကိုင်း ...ဘာသောက်မလဲ
" မောင်ရင်တို့ ထဲက တစ်ယောက်....ဟုတ်လား...နားမလည်နိုင်တော့ဘူး..ရှင်းပြစမ်းပါဦး "
" ဒီလိုပါ...လုံးတီးရုပ်တုမှာ ဖုံးထားတဲ့ သစ်ရွက်ကို တစ်ယောက်ယောက်က လှန်ကြည့်လိုက်တိုင်း ကျနော့်
ဘားကောင်တာ ပတ်လည်မှာ တပ်ထားတဲ့ ရောင်စုံမီးလုံး အားလုံး လင်းလာပါတယ်.. ကိုင်း ထပ်မေးမယ်
ဘာသောက်မလဲ ခင်ဗျာ.. "